Xeer Ilaaliye Kuxigeenkii Qaranka Axmed Cali Abuukar oo xilka laga qaaday | SAHAN ONLINE
Xeer Ilaaliye Kuxigeenkii Qaranka Axmed Cali Abuukar oo xilka laga qaaday
Dr Axmed Cali Abuukar
MUQDISHO – Warar aan helnay ayaa sheegaya in Xeer Ilaaliye Kuxigeenkii Qaranka Dr Axmed Cali Abuukar xil ka qaadi lagu sameeyay,iyadoona warar kala duwan kasoo baxayaan qaabka xilka looga qaaday.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa u xaqiijiyay Sahan Online in Xeer Ilaaliye Kuxigeenka xilka looga qaaday digreeto kasoo baxday Xafiiska Madaxweyne Farmaajo,walow aan weli la helin digreetada.
Warar kalena waxa ay sheegayaan in Xeer Ilaaliye Kuxigeenka shaqada laga casilay ay xil ka qaadistiisu la xiriirto kiiska Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sheegay in uu ka horyimid qaabka Xeer Ilaalintu ay u wajahday dacwada lagu soo oogay iyo habkii loo maray xarigiisa.
Warar kalena waxay intaas ku darayaan in xilka Xeer Ilaaliye kuxigeenka loo magacaabay mas’uul kale oo magaciisa lagu soo koobay Muuse Macallin oo markii hore kamid ahaa Kuxigeenada Xeer Ilaaliyaha guud.
Hay’adaha Garsoorka ayaa isku khilaafsan kiiska siyaasigan oo dib ay furtay Maxkamadda Rafcaanka isla markaana soo saartay warqad ay ku mudeysay dhageysiga dacwadiisa kaddib markii Xeer Ilaalinta ay sheegtay in ay rafcaan ka qaadatay.